Maamulka Yahuudda oo doonaya in uu xiriir layeesho dalka ay ku noolyihiin Muslimiinta ugu badan caalamka. – Somalimirror.net
Xarunta caalamiga ah ee nooleynta xusuusta maxraqadii Bad Fashiim, fadhigiisuna yahay magaalada barakeysan ee Al-Qudus ee kujirta gumeysiga maamulka Yahuudda ayaa ku guuleystay in matxafkii ugu horeeyey ee lagu keydiyo xusuusta gumaadkaas hirgeliyaan bishii Janaury ee sanadkan 2022-da, waxayna ka fureen wadanka Indonesia.
Dadka Yahuudda ah ee tallaabadan qaaday waxay sheegeen iney tahay mid ay ku taxadinayaan neceybka ay muslimiinta u qabaan dadka Yahuudda, tusaanna sida Yahuuddu xilligan la joogo galaangal ballaaran ugu leedahay dalalka caalamka Islaamka.
Waxay kaloo ku doodayaan dadka Yahuudda ah in tallaabadan ay tahay mid sidoo kale ay ku burinayaan riwaayaadka dadka qaar ee shakiga ka muujinaya waxa loogu yeero Holokost, oo ah xasuuq la sheegey in Naaziyiintii Hetler u geysteen dadka Yahuudda.
Todobaad kadib markii Yahuuddu matxafkan ka fureen dalka Idonesia, waxay jamaacaadka islaamiga ah ee ka dhisan Indonesia billaabeen olole ay ku dalbanayaan in lagu xiro mataxafkan Yahuuddu leedahay.
Ururka Baraaruga Culimada oo ah urur ka dhisan dalka Indonesia ayaa ku baaqay in gebi ahaanba irdaha la isugu laabo matxafkan, iyagoo sheegay in tallaabada lagu furey ay tahay mid gogol xaar u ah isku deyga Yahuudda ee la xiriira iney xiriir toos ah laa yeeshaan dalka ugu weyn, kuna noolyihiin muslimiinta ugu badan caalamka oo ah Indonesia.
Horey wuxuu maamulka Yahuuddu u sheegey iney aad ugu rajo weynyihiin in Indonesia ay raacdo tareenka dowladaha sida muuqata u caadiyeeyey xiriirka ay la leeyihiin Yahuudda, wufuud ka socotay Jakarta ayaana tagay Talla’biib, iyagoo ku doodaya in Yahuudda ay ka faa’ideysanayaan culuumta la xiriirta majaalaatka caafimaadka, beeraha iyo Technology-yada.
Marka tani ma waxay ka dhigantahay in Yahuuddu qarka u saaranyihiin iney gaaraan damacadooda la xiriira xiriir ay la yeeshaan Indonesia, dalkaasna ku daraan liiska dowladaha sida muuqata ula macaamila maamulka Yahuudda ee dhibaatada ku haya muslimiinta Filastiin?.
Marka laga hadlayo xiriirka u dhexeeya dowladda Indonesia iyo madaxda maamulka Yahuudda wuxuu soo billaabanayaa waxyar kadib markii Yahuuddu xooga ku qabsadeen dhulka Filastiin, xiriirkaas ayaana ahaa mid kooban illaa talada dalka Indonesia uu la wareegay madaxweynihii Muxamad Soohaarto, markas oo ay Jakarta qaaday tallaabooyin waaweyn, oo ay kamid ahayd in Yahuudda ay la saxiixdeen heshiisyo qarsoodi oo xaga milliteriga ah.
Todobaatameeyadii illaa sideetameeyadii, waxay dowladda Indonesisa hub kala duwan ka iibsatay kayaanka Yahuudda ee gumeysiga ku heysta Filastiin, waxaa intaa sii
dheer in ciidamo ka socda Indonesia ay aadeen dhulka Filastiin, iyagoo tababar milliteri ka helaya saraakiisha Yahuudda.
Marka laga hadlayo iskaashiga xaga Dhaqaalaha, waxay ku ekeyd markii hore in Indonesia ay u dhoofiso Yahuudda waxyaabo badan oo la beerto sida saliida qumbaha, Alwaaxda iyo waraaqaha, iyadoo taa bedelkeeda Yahuudda kaga faaideysan jirtey xaga xaga Technology-yada.
Marka laga hadlayo ballaarinta xiriirka u dhexeeyay Yahuudda iyo Indonesia, wuxuu suuragalay waqtigii uu talada dalkaas joogay ninka lagu magacaabo Cabdi-Raxmaan Waxiid, kaasoo lagu tilmaamo inuu ahaa nin aad ugu dadaalay sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka rasmiga ah ee u dhexeeya Yahuudda iyo dalka Indoneisa.
Inkastoo mucaarado xoogan oo gudaha uu la kulmey, taasoo fikraddii caadiyeynta xiriirka muuqda dhulka ku aastey, hadana waxaa xilligiisa si joogta ah u dhacayay kulamo qarsoodi ah oo dhexmarayay madaxda maamulka Yahuudda iyo dowladda Indonesia.
Yahuudda Indonesiyaanka ah oo tiradoodu yartahay ayaa aad uga shaqeeyay sidii la isugu xiri lahaa madaxda Yahuudda iyo kuwa dalka Indoneisa,
Yahuudi Indoesian ah oo lagu magacaabo Binyamin oo wax ku baranayay dhulka Filastiin ayaa madaxweyne Waxiid wuxuu ka heley ogolaansho ah inuu hirgeliyo gudiga isku xirka Yahuudda iyo Indonesia oo magaciisa loo soo gaabiyo IIPAC.
Gudigan waxaa la aas-aasey sanadkii 2002-da, waxaana xubin ka noqday ugu yaraan 4450 xubnood oo isuga jira dad Yahuud ah iyo kuwa kasoo jeeda dalka Indonesia.
Inkastoo dowladda Indonesia ay culees saareysay xiriir ganacsi oo toos loola yeesho maamulka Yahuudda, maadaama dowlad aan looga aqoonsaneyn dalka, hadana waxaa sanadkii 2009-ka magaalada Talla’biib looga dhawaaqay Rugta gacanasiga ee Yahuudda iyo Indonesia, iyadoo ujeedadu tahay in lasii xoojiyo is dhaafsiga dhaqaalaha ee Yahuudda iyo dalka Indonesia.
Qiimeyn la sameeyey sanadkii 2008-da waxaa lagu ogaaday in isdhaafsiga ganacsi ee Yahuudda iyo Indoneisa uu gaarey 100 malyan oo dollar, masuuliyiinta Talla’biib ayaa dhowrjeer waxay kala hadleen madaxda Indonesia iney hoos u dhigan qiiimaha Vizaha la siiyo dadka Yahuudda oo u dhigma 800 oo dollar, si loo xoojiyo dalxiisayaasha Yahuudda ee imaanaya dalka Indonesia.
Inkastoo laga yaabo in mowjadaha caadiyeynta xiriirka ee dowlado carbeed qaarkood la gaareen Yahuudda uu madaxda Yahuudda u muujiyay suurtagalnimada in Indonesia lagu soo daro tareenka Caadiyeynta xiriirka, hadana isku dayadaas ma ahan kuwa hadda soo billowday, waaya fog ayayna isku dayeen madaxda Yahuudda iney ku qanciyaan madaxda Indonesia in si muuqata oo cad ay u ogolaadaan xiriir rasmi ah oo ay yeeshaan Yahuudda iyo Indonosia.
Inkastoo Indonesia aaney si rasmi ah u ogolaan arinkaas, oo ay door bidey in sifo aan rasmi ahayn ama muquan ula tacaamusho Yahuudda, hadana madaxda Yahuudda waxay had iyo goor soo celceliyaan isku dayadaas, iyagoo doonaya in haddii ay ku guuleytaan xiriirka Indoneisa oo ah dalka ugu badan ee ay ku noolyihiin dad muslimiin ah, ay mugdi geliyaan aragtida xaqiiqda ku saleysan ee ah in muslimiintu necebyihiin Yahuudda, aqoonsaneynna iney iyagu leeyihiin dhulka Filastiin.
Yahuudda ayaa ku dadaalaya in jawaanibta uu ka liito dalka Indenosisa ay kusoo jiitaan, si ay xiriir muuqata ula yeeshaan kayaanka Yahuudda, Radiyaha Yahuudda ayaa bishii Janaury wuxu baahiyay warbixin la xiriirta in Talla’biib ay soo gaareen wafdi caafimaad oo ka socda dalka Indonesia, kuwaasoo madaxda Yahuudda kala Hadley qaababka looga hortagi karo cudurka saf mareenka ah ee Corona virus.
Inkastoo ay beenisay dowladda Indonesia warbixintaas, hadana waxaa iska cad in booqashadu jirto, sidoo kalena Indonesia ay ka liidato xaga caafimaadka, taasoo ku riixeysa iney la tacaamusho cid weliba oo ay kaga faa’ideysan karto dhankaas oo ay kamid yihiin Yahuuda dhul boobka ah.
Marka laga yimaado xaga caafimaadka, waxay Yahuuddu isku dayayaan iney Indonesia kusoo jiitaan jaanibka Tamarta iyo korontada, maadaama Yahuudu heystaan qalabyo sahli kara in si fudud lagu gaaro ilaha dhaqaale ee naftada.
Iskaashiga xaga beeraha ayaa lagu tiriyaa mid kamid ah majalaaatka muuqda ee ay Yahuudu ku faanaan, lana leeyihiin dalka Indoneisa, warbaahinta Yahuudda ayaa mudooyinkii u dambeeyey waxay sheegeen in masuuliyiin katirsan Yahuudda iyo Indonesia ay kawada hadleen iskaashiga xaga wax soo saarka iyo badqabka cuntada, ninka doonaya inuu madaxtnimada dalka Indonesia isku soo sharxo sanadka 2024-ta ayaana Talla’biib u arka albaabka ay Jakarta u mari karto hagaajinta xiriirka kala dhexeeya dowladda Maraykanka.
40% shaqaalaha dalka Indonesia waxay ka howlgalaan beeraha, taasoo muujineysa ahmiyadda wax soo saarka xaga beeraha uu ugu fadhiyo dhaqaala dalka, sidaas darteed baahidaas ayay isku dayeyaan Yahuudda iney uga faa’ideystaan madaxda dalka Indonesia.
Maraykanka iyo dowlado carbeed qaarkood ayaa ku dhiiragelinaya Jakarta ineysan ka laba labeyn xiriir muuqda oo ay la yeelato Yahuudda, Antony Blinkin wasiirka arimaha dibadda ee Maraykanka ayaa booqasho u uku tagay Indonesia bartamihii Decembar sanadkii tagay waxay warbaahinta Maraykanku xaqiijiyeen inuu kala hadlay madaxda dalkaas sidii ay u caadiyeyn lahaayeen xiriirka kala dhexeeya Yahuudda.
Maamulkii Trump ayaa laftiisa wuxuu aad isugu howley in wafdi ka socda dowladaha Asia oo ay kamid tahay Indonesia kasoo qeybgeliyo xafladda lagu saxiixayay heshiiskii Abraham ee Yahuudda lagu siinayay magaalada Al-Qudus, hase ahaatee sida muuqata waqtiga ayaana u saamixin iney arinkaas ka guul gaaraan.
Xilligaas, madaxda Indonesia ayaa codsaday in la ballaariyo xiriirka ganacsi ee ay la leeyihiin Maraykanka, si iyaguna tallaabo ugu qaadaan xaga caadiyeynta xiriirka Yahuudda, laakiin dhamaadkii waqtigii Trump waxaa istaagay wadahadalladii la xiriirey jaanibkaas.
Maamulkii cusbaa ee Biden ayaa laftiisa wuxuu sii amba qaaday siyaasaddii Trump ee la xiriirtey in Yahuudda xulafo muuqata looga abuuro caalamka Islaamka, siyaasadda arimaha dibadda ee Washington ayaana hadda waxay kaalinta koowaad beegsaneysaa dalka Indonesia, marka laga hadlayo caadiyeynta xiriirka wadamada caalamka Islaamka la leeyihiin Yahuudda dhul boobka ah.
Imaaraatka Carabta oo safka hore kaga jira dowladaha carbeed ee caadiyeeyey xiriirka kala dhexeeya Yahuudda ayaa galaangal xaga maalgashiga iyo dhaqaalaha wuxuu ku leeyahay dalka Indoneisa, madaxweynaha dalkan ayaana Abuu Dubi wuxuu u arkaa saaxiib wanaagsan oo uu ku leeyahay Khaliijka.
Rajada ugu weyn ee uu qabo maamulka Yahuudda waa doorashooyinka madaxtnimada ee la filayo in dalka Indoenisa ka dhacaan sanadka 2024-ta, doorashadaas oo dadka ugu cad cad ay kamid yihiin dad u ololeynaya in la caadiyeeyo xiriirka Yahuudda.
Waxay kaloo Yahuuddu rajo iyo ifafaalo ka arkaan ninka cusub ee loo dhiibay hogaaminta ururka baraaruga culimada ee ka jira dalka Indoneisa, ninka lagu magacaabo Yaxya Shaliil, kaasoo horey u booqday dhulka kujira gumeysiga Yahuudda, dhibna aan u arkin in lala macaamilo Yahuudda xooga ku heysato masjidul Aqsaa iyo dhulka barakeysan ee Filastiin.
Previous PostCiidamada Jabuuti oo lagu eedeeyay in ay gubeen guryo ay lahaayeen dad shacab ah.
Next PostMidowga Afrika iyo hay’ado reergalbeed ah oo walaac ka muujiyay walxaha qarxa.